10 matambudziko akajairwa pa iPhone 6 uye 6s uye maitiro ekuapedza | IPhone nhau
Carmen rodriguez | | IPhone nhau, iOS 8, iPhone 6, iPhone 6 Plus
Isu tese tinoziva matambudziko ari kupi iyo nyowani iOS 8 uye isu tinomirira iyo yekuvandudza senge May mvura, asi isu tinofanirwa kuziva kuti izvi gadziriso haigadzirise matambudziko ese iyo yatinogona kuwana mune yedu terminal.
Nhamba ye iPhone 6 matambudziko Iyo yakafara (inoshandawo kune iyo iPhone 6s), asi zvakajairika ndidzo zvatichaongorora uye isu tichafumura nzira yekuzvigadzirisa tichimirira update, iyi kana inotevera, mairi yakatarwa yakananga.
Kana iwe uine iPhone 7, usapotsa Ndezvipi zvikanganiso zvako zvakajairika uye zvinogadziriswa sei
1 Kugadzirisa sei iPhone 6 bhatiri matambudziko
2 Maitiro ekugadzirisa matambudziko ekubatana kweWiFi
3 Maitiro ekugadzirisa sei iPhone 6 matambudziko neBluetooth
4 Maitiro ekugadzirisa zvinokanganisa zvine chekuita neapp
5 Maitiro ekuvandudza mashandiro
6 Maitiro ekugadzirisa Jams muLandscape uye Portrait View
7 Maitiro ekugadzirisa matambudziko neMessage
8 Maitiro ekudzivirira akasarudzika reboots
9 Maitiro ekuvandudza keyboard kukurumidza kupindura
10 Maitiro ekudzivirira mafoni data data
11 Matambudziko epakati: maitiro ekusunungura ndangariro
12 Matambudziko eSound
13 Kana pasina chinoshanda
Kugadzirisa sei iPhone 6 bhatiri matambudziko
Zvese zvinogadziridzwa zvine zvakashata pahupenyu hwebhatiri reiyo terminal uye iOS 8 haina kuidzivirira. Isu tinofanirwa kuve nechiono chakajairika cheichi chinetso uye tinzwisise kuti kushandiswa kwebhatiri zvakare yakatarwa nemashandisirwo maitiro iyo yatinomupa, ndosaka ndichifunga kuti Apple haadaro hapana kuvandudzwa mune izvi mune remangwana system kugadzirisa.
Pane zvinhu zvakawanda zvatinogona kukurudzira, asi chakanakisa ndechekuti tarisa all mazano atakatopa kare mune yapfuura positi uye sarudza iyo inokodzera zvakanyanya zvaunoda uye shandisa.
Maitiro ekugadzirisa matambudziko ekubatana kweWiFi
Kwemakore maviri apfuura, mabhodhi ekukurukurirana eApple anga akazara nezvichemo nezve WiFi, kubva pamasaini akadzivirirwa kune kubatana kusagadzikana. Izvi zvichemo hazvina kumira neIOS 8. Kunyange pasina mhinduro yakavimbiswa pane zvinhu zvishoma zvekuyedza usati watora matanho akasimba.
Sarudzo yekutanga ndeyekugadzirisa zvakare maratidziro enetiweki Zvirongwa > General > Dzosera > Dzorerazve network marongero. Iwe uchafanirwa kuisa zvakare password kuti uwane iyo WiFi.
Iyo yechipiri imwe nzira ndeye kudzima iyo system yeWiFi. Zvayo: Zvirongwa > Privacy > Nzvimbo > System masevhisi. Bvisa iyo WiFi Network Kubatana y kudzokerazve runhare. Kamwe kukanganiswazve kune mukana wekuti iyo WiFi iri kushanda zvakajairika.
Kana matambudziko ako na de sync pamwe iTunes, shanyira iyo gwara kugadzirisa dambudziko iri.
Maitiro ekugadzirisa sei iPhone 6 matambudziko neBluetooth
Sezvineiwo, iyi inyaya ine zvichemo zvakawanda, kunyanya kubva kune avo vanoshandisa basa racho kubatana nemota handsfree. Hongu OK hapana imwechete-saizi-inokodzera-mhinduro yese kana mota dzisina maoko uye zvigadzirwa, kana tichigona kuvandudza kubatana kweIOS 8.
Tevedza nzira: Zvirongwa > General > Dzosera uye pano enderera ne Hola. Zvirongwa zvese zvakachengetedzwa zvicharasika, asi zvinoita sekugadzirisa nyaya kune vashandisi vazhinji.
Mamwe mashoko: Maitiro ekudzoreredza kubatana kweBluetooth nemotokari mushure mekuvandudza kune iOS 8.0.2
Maitiro ekugadzirisa zvinokanganisa zvine chekuita neapp
Zvichemo uye kunetsekana zvakanzwikawo nezve maficha ari muhurongwa hwekushandisa hutsva chando kana kungovhara. Ini pachangu, iyo yemuno Meseji app inovhara pese pandinoedza kupindura kune meseji. Saka ini handishamiswe kana yechitatu-bato maapplication achizviita.
Native maapplication anotambura kuchinjika uye kugadzirisa bug, asi avo vevatatu-vebato vanozove basa remugadziri wega wega, Apple haizobatsire kana kupindira uye, mune izvi ndinobvumirana nekambani.
Naizvozvo, chinhu chega chasara kuita ndeche chengeta maapplication kusvika pari zvino. Kune vane usimbe, yeuka kuti iwe une sarudzo yekumisikidza otomatiki zvigadziriso, pane izvi iwe unofanirwa kutevera nzira: Zvirongwa > iTunes Chitoro neApp Store uye muchikamu che Otomatiki kurodha pasiEhe, iwe unofanirwa kumisa sarudzo Zveshuwa.
Maitiro ekuvandudza mashandiro
Nepo ruzivo rwedu neIOS 8 pane iyo iPhone 6 rave rakanaka uye nekukurumidza, vamwe vakamhanyira mune kusarongeka kunononoka uye kumwe kunonoka pane iyo iPhone nyowani. Kunyangwe iyi isiri nyaya parizvino, tinogona kuve nenyaya dzekuita kwemavhiki anotevera.
Iyo inononoka iPhone? Kuchinja bhatiri kungaigadzirisa
Kune dzimwe nzira dzekumhanyisa mashandiro eiyo iPhone 6 iyo inogona kubatsira, ivo vari chaizvo kuderedza mhedzisiro kubva kuIOS 8, mamwe ari;
Bvisa parallax maitiro uchishandisa nzira: Zvirongwa > General > Accessibility > Deredza Kufambisa. Ona kuti yaiswa «Si»Kuti ubvise mhedzisiro, kana zvisiri, enda wotinya switch Deredza Kufambisa kuti ishanduke ive green.
Bvisa pachena, enda ku: Zvirongwa > General > Accessibility > Wedzera Kusiyanisa > Deredza Kujeka uye shandisa iri basa.
Maitiro ekugadzirisa Jams muLandscape uye Portrait View
IPhone 6 inogara yakanamatira mukutarisa kwenzvimbo mushure mekuchinja kuita vertical. Iri idambudziko rakakura, kunyanya kana uchishandisa kamera app. Iko hakuna mhinduro, asi kune bhendi-yekubatsira.
Paunenge uchizoshandisa iyo imwecheteyo maonero maitiro, inokiya kutarisisa kwefoni mune yekudzivirira nzvimbo menyu.
Maitiro ekugadzirisa matambudziko neMessage
Mamwe matambudziko kusakwanisa kutumira meseji nyowani, nyora nyowani sekuverenga kana mameseji anononoka kusvika. Mumamiriro ezvinhu aya pane zvimwe zvigadziriso zvatinogona kuyedza.
Dzvanya uye shandisa iMessage (ramba uchifunga kuti ine mutengo)
Dzorerazve iyo setup nharembozha: Zvirongwa > General > Dzosera > Dzorerazve network marongero. Foni ichaitazve uye ichengetedze maWiFi network acharasika
Maitiro ekudzivirira akasarudzika reboots
Kune vamwe vashandisi iyo zvisizvo reboots (ndangariro dzinodonha) pa iPhone 6. Kukanganisa uku kwakaitika kare pa iPhone 5, 5s uye iPad Mini, Mhepo neRetina. Kunyangwe zvisingaitike kakawanda sezvaimboita, zvichiri kuitika kune vamwe vashandisi.
Kunyange pasina mushonga unogarisa, uripo mamwe matipi:
Kutangazve iPhone 6.
Gadzirisazve na: Zvirongwa > General > Dzosera > Hola.
Uninstall ikozvino mapeya
Kumirira iOS 8.1.
Maitiro ekuvandudza keyboard kukurumidza kupindura
Dzimwe nguva a lag shoma pane iPhone 6 keyboard kana uchinyora email kana meseji. Iko hakuna kunyatso kurapa kweizvi kana, asi iwe unogona kuseta zvese marongero: Zvirongwa > General > Dzosera > Hola.
Maitiro ekudzivirira mafoni data data
Inononoka kubatana, kusakwana kwekubatana uye mamwe matambudziko akafanana uye zvine chekuita nekubatana neanoshanda zvinotaurwa. Kuedza kugadzirisa matambudziko aya;
Dzinga nharembozha: Zvirongwa > Data Nhare mbozhabvisa iyo mobile data uye 4G sarudzo.
Activate iyo ndege muoti, mirira masekondi makumi matatu uye wozvimatanura zvakare kuti umise kutsvaga kwe nharembozha.
Matambudziko epakati: maitiro ekusunungura ndangariro
Kana nharembozha yako yagara hapana yemahara ndangariro kuchengetedza zvimwe zvinoshandiswa, mapikicha kana chero chaunoda, usapotsa izvi matipi ekusunungura nzvimbo pane yako iPhone.
IPhone matambudziko ezwi
Kana yako iPhone yakanyarara kwazvo kana kusanzwika zvakananga, unogona kunge uine dambudziko rine chekuita neiri mutauri. Mukudaro, apa tinokuratidza zvikonzero uye mhinduro dzinogoneka dzeavo iPhone inzwi matambudziko.
Kana pasina chinoshanda
Kana pasina chimwe cheichi chinoshanda uye iwe usingakwanise kuwana mhinduro mumaforamu eApple, ini ndinokurudzira nzira mbiri. Kutanga, tora iyo iPhone uye uende nayo kune Genius Bhawa kubva kuApple Chitoro. Kune avo vasingakwanise kana vasingade kuenda, ivo vanofanirwa kufunga kuitisa rfekitori yekumisikidza.
Ndeipi pane izvi iPhone 6 matambudziko wakambotambura here? Pane chero izvo zvisipo pane izvo zvinyorwa? Tiudze mabugs yako iPhone 6 kana 6s yakave nayo uye kuti wakazvigadzirisa sei.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 8 » 10 matambudziko akajairika pa iPhone 6 uye maitiro ekuapedza
kazhinji usashandise foni kana kubvisa zvese zvitsva kubva kuIos 7
Mumwe munhu ave nedambudziko nefoni 6 plus kamera, mune yangu anotora pikicha uye kune makore. Izvo zvinongoitika kwandiri neiyo 12mpx kumberi kamera. Ndinoda RUBATSIRO. NEKUTI MURUUGUAY ZVINOITA SOKUVA NENYAYA YOKUWANDA PAMWE NEZVAVAKandiudza DAMBUDZIKO.
Ndechipi shit post.
Seta zvese, kana zvikasashanda kwauri ... hapana mhinduro.
Mukati memwedzi mumwe muchaitsikisa zvakare neimwe zita
Mariana tsime rezita rokutanga akadaro
Chinhu chimwe chete ichocho chakaitika kwandiri uye chaive chekuti ndaifanira kuchenesa lens yenzvimbo .. pfff ndinovimba ndizvo zvazviri chete! rombo rakanaka!
Carmen, ndapota, nyatsoteerera kana uchinyora zvese zviperengo uye zvinyorwa uye kuwirirana kwazvo. Ndinodudza zvimwe zvezvikanganiso zvinoonekwa neziso rakashama "kuziva" kuziva, "tinofanirwa kuona chiratidzo chakazara" Iwe uchaona sei chiratidzo chakazara? Chero zvazvingaitika, zvingave kuva nechiono chakakura, "ndosaka ndichifunga kuti Apple haigadzirise" zvingave handifunge kuti Apple ichaita chero gadziriso nekuti kana ikasaita gadziridzo. , zvaizoita shanduko. Uye kune rimwe divi, ichi chinyorwa chinodzokororwa, chakanyanya kufanana nemunyori mumwechete uye zvakare hazvina basa sezvo zvese izvi zvatova kupfuura zvataurwa, sezvavakambotaura, kudzoreredza uye kana zvisipo hapachina.
Vakomana, kana iwe uchihaya vapepeti, ndapota ziva izvo zvavanonyora uye, zvirinani, kuziva nekuziva kunyora nerurimi rwaamai.
Carmen rodriguez akadaro
Iyi posvo mubatanidzwa (sezvakaratidzirwa nemusoro wenyaya uye lead) uye nezve kutaura uye girama, ini ndinongokuudza iwe kuti uverenge chirevo chako zvakare, icho chizere nemaperengo kukanganisa uye kusavapo kwemataurirwo usati watanga kushoropodza vamwe.
Kana iwe usina chekuita, zviwanire iwe wekutandarira asi rega kutaura zvisina maturo, nenzira, Spanish, kunyangwe uri mutauro wangu wechipiri, hausi rurimi rwaamai, saka waita wakakwana.
Pindura kuna Carmen Rodriguez
Ndave ndiri muverengi we peji rino kwenguva yakareba, Carmen anogara achishoropodzwa, dzimwe nguva aine zvikonzero zvakawanda uye mune vamwe vane zvishoma, ndiregerere nekukuudza iwe Damian, uye neruremekedzo rwese rwakakodzera, izvi zviri kutsvaga zvisingaiti ... wakakwenenzvera kwazvo panguva ino, zvese zvekuda kuteedzera «fashoni yekutuka» usaedze kunyepedzera, nekuti zvinoratidza kuti hauna **** pfungwa yekutaura ...
Marcelo pepe akadaro
Zvakanaka Carmen! Ava ndivo vasina kana chekuita nekuverenga kuti vaone zvavanofanira kushora…. Kwaziso, ramba wakadaro, uchitizivisa kana kutiumba isu, sezvo tisingakwanise kuverenga zvese uye zvinokodzera vazhinji vedu.
Pindura Marcelo Pepe
Muromo wako uzere nekufunga, Damien, kana iwe ukapa rairo, gara nayo.
Nenzira Dhamian, HAKUNA "kuziva"; "kuziva", sekunyora kwaCarmen zvakanaka. Kune vamwe vese, hongu, chinhu chimwe chete icho Carmen anokuudza; Zvakamboitika here kwauri kuti uone ongororo yako? Hapana kana tilde imwe yawakaisa (uye kune akati wandei asipo). Zvisinei, usape zvidzidzo zvechiperengo kana iwe usingatomboziva kunyora nemazvo.
Damien: hana nehana zvinobva muchiLatin cum scio, munguva ye freíd izwi rekuti hana rinozivikanwa uye ndiyo yega inorasikirwa nesc sc.
Errata Freud haana kuchaya
Damien, apa iwe pinda kufumura matambudziko auinayo nemaPhones, kwete kuratidza hunhu hwemurume akanaka kwazvo, ari kukanganisa munzvimbo isiriyo.
hahaha, rakakura dhongi ... kutaura zvakaipa kune vamwe nezve zvakashata uye pamusoro peizvozvo, kuisa zvakashata pauri hahaha chii chakapusa
Ichokwadi ndechekuti unoonekwa seizvi uri kutaura chokwadi, ndinofunga isu tiri masochist zvakare vane kutenda kusingaoni kuti zvese zvichagadziriswa, asi hei, matambudziko aya anoitika kunyangwe mumhuri dzakanakisa uye, mune ino kesi, mune vese vagadziri kune mukuru kana zvishoma.
Ini ndajaira iyo iPhone uye ini handichinje kunyangwe paine mamwe matambudziko andinopfupikisa pamusoro….
Ndatenda nekutaura kwako uye nekukuremekedza, ichokwadi mweya mutsva.
Isu tese tinoziva kuti mavhezheni ekutanga eiyo yega yega uye osx vhezheni inounza mabugs.
Kuti vagadzirise nekufamba kwenguva, mune iyo ios kana ichifanira kuvandudzwa zvinoenderana nekubuda mu osx gara mune yekupedzisira danga kusvikira iyo nyowani igadzikane, ndinozvitaura na yosemite ndipo painosvika.
Sekutaura kwaCarmen, hapana chakakwana kana munhu akakwana, vanogara vaine sarudzo yekuenda kune imwe chikuva kana vachifunga kuti vanoita zvirinani.
Zvinosetsa sei kuti zvese zvese zvaunosheedzera hazviitike kwandiri pane yangu iphone 6 plus, zvakandinakira
Pindura kune vndiesel
Iyo 6 yekuwedzera iri kundifambira chaizvo, asi imwe pfungwa yekuona inogara ichibatsira uye panogara paine chimwe chinhu chinotiza iwe uye kunyanya kana iwe uchibatanidzwa nezvimwe zvinhu zvisiri nhare, posvo inokosheswa pamwe neiyo vamwe uye nhau, zvese zvirimo uye neshure, mazuva ese ini ndinokushanyira kakati wandei kuti ndione kana iwe ukaisa matsva matsva uye kunyangwe ndanga ndiine Apple kwemakore mazhinji iwe unogara uchindidzidzisa chimwe chinhu iwe newe shamwari dzako mapeji ane hukama ne mac uye ipad.
Chinhu chaicho chaive kutora musoro "gumi matambudziko akajairika muIOS 10"
Maona ini ndinoshanda nenharembozha uye kazhinji pane matambudziko akawandisa ne iphone 6 ne6 plus iko zvino sezviri pachena pakutenda kwangu kwavakatangisa vasina kuyedza chigadzirwa chavo zvakanaka sezvo iine zvikanganiso zvakawanda zvinongogadziriswa neregedzo, asi zvinowanzoitika zvakare uye chokwadi hatisi kuzochipedzera kutanga patsva
Ndine iphone 6 pamwe ne ios 8.1 uye jailbreak uye inoenda sepfuti, ndinofara nekutenga ini ndinofanirawo kutaura kuti ndisati ndave ne iphone 4 ine jeri uye hapana ruvara bhatiri rinogara kwenguva refu, wifi inoenda nekukurumidza uye handitombokuudza nezvemitambo futi uye handifanire kunge ndichiita semuChinese akatarisa pachiratidziri, inokwana zvakakwana muhomwe dzemabhurugwa angu kunze kwekunge wakapfeka bhurugwa rakatsetseka rakaonda rino kwete maitiro angu uye ndakagara pamusoro payo kanopfuura kamwe pandakapinda mumotokari uye haina kukombama millimeter, ndiko kuti kana ini ndakanyatsochengetedzwa neckeke fusion butiro negirazi rakadzikama pachiratidziri.
Ndakatenga iphone 6 uye kakawanda pandinenge ndiri pamba newifi ... Hapana dambudziko ... Asi kana ndikabva pamba ... ndinofanira kudzima uye kumutsa data renhare kuti iyo 3g kana 4g ishande zvakanaka.
Izvi zvinondiputsa ... Tichifunga kukosha kwechikwata
Arturo Glezca akadaro
Ino inguva yechitatu ndadzorera yangu iPhone 6 (Neni). Ndazvitora kuti ndivimbise imwe 3 ini ndinoda shanduko kana kudzoreredzwa, asi vanoidzorera uye vanondiudza kuti yatove kushanda uye havadi kuichinja. Ndoita sei ikoko ??? Apple inofanira kubhadhara zvakanyanya, sezvo isu tisingashandise pane 200Dlls terminal ... Inodhura kupfuura 900Dlls, ndinodzokera kune yangu Galaxy S5
Pindura kuna Arturo Glezca
masikati akanaka munhu anogona kundibatsira
Ini ndakaisa yangu iPhone 6 ndinoiitawo muma resets nekuti ndakaitengesa ikagara pachiratidziro chemumba neapuro logo uye haina kutangazve kana kuita chero chinhu chakaramba chiripo… ? Chii chandinofanira kuita kuti ndigadzirise?
Zvakanaka, ndine dambudziko pese pandinotenga ringtone, anoiisa senge toni, kunyangwe paine zvese prefect, kungoti mushure memaminetsi mashoma toni inobviswa uye paanondidaidza kuti default toni inobuda asi toni iri kubhadhariswa uye ini handiwane mukutenga kwakaitwa kana kurodha pasi,
Carmen, zvakandibatsira zvakanyanya, maita basa.
Dambudziko rangu nderekuti kana irikubasa inosangana neoffice wifi, asi kana nguva dzangu dzekushanda dzapera haibatanidze neinternet yeiyo iphone chirongwa, ini handizive kuti ndozvigadzirisa sei
Mhoroi, pane chero munhu angandibatsira? magadzirisiro andakaita dambudziko rakareba rekrini uye hazvindibvumidze kuvhura kana kudzima iyo iPhone 6 sezvo isingazondibvumidze kuona iyo keyboard Ndinotenda usiku hwakanaka. Nenzira, ini ndatoedza kuyedza kukwereta bhatiri uye kurichinjazve iro rinoita kuti iro riwedzere skrini zvakare.
Carmen Rodriguez (@carmenrferro) akadaro
Mhoroi Elias, edza kuita DFU kumanikidza kutangazve maitiro ese, ndinovimba izvi zvinokubatsira, zvagadzirisa matambudziko mazhinji kwandiri.
Pindura kuna Carmen Rodriguez (@carmenrferro)
Angeles malangizo akadaro
Mhoroi ELias, wakakwanisa kugadzirisa dambudziko racho here? Chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri ine iphone 6s nyowani. = /
Pindura kuna Angeles Guidobono
Yangu iphone 6 plus haina kubatana nemac yangu nebluetooth, ini ndinongowana kodhi kodhi uye yakafanana, ndinoipa link, asi handizive zvekuita, mumwe munhu anogona kundibatsira padambudziko iri, ndatenda , kwaziso
Sei kana ndiine mapikicha mazana masere nemakumi mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe pandinobvunza muarubhamu «Mifananidzo yese» ini ndinowana 895 pandinobvunza Mifananidzo muZvirongwa zveRuzivo?
havatauri chero chinhu chitsva
izvi hazvibatsire zvachose
Nguva pfupi yadarika handina rombo rakanaka nemazanita. Iyo iPad Mhepo yakamira kushanda, ndakanga ndaitsiviwa mu STORE muWashington DC uye ndakanga ndisisina mamwe matambudziko, asi iyo iPhone 5s iyo yandakachinja musi iwoyo iwoyo mushure memwedzi mitatu yamira kushanda, ingo kana iyo yekutsiva garandi yapera. Iyo MacBook Pro kamwe kamwe yakava kadhi rangu, iro rakapesana neMhepo iri kuve iri nani uye iri nani. Iye zvino mhuri yese yave ne iPhone 6Plus uye kwete mazuva maviri apfuura izvo handifanire kumanikidza kutangazve. Hazvisi zvinhu zvakachipa kuti izvi zviitike. Ndakafarira MacBook iyo yave kuda kubuda, asi iyo inodhura yatove yechinyakare uye haina kana tunderbolt 2 adapter (a 1 kana).
Zvingave zvakanaka kana saiti ikapindura zvinhu izvi nekuti isu vedu vanonyora vashandisi, kwete mahunyanzvi.
Kuti andibatsire ini ndinofanirwa kudzima mafekitori ekushandisa ayo
Iphone6 ​​nharembozha yakabva yandiudza kuti ndaifanira kugadzirisa updateNdakachiisa pachiratidzu 1 app yewachi sezvo ini ndichiidzima axuliooooo !! Rubatsiro rwekukurumidzira !!
Ivo vari kubvisa memory kubva ️my foni mbozha 😔
Zvakanaka, kana ivo vakamisidzana pamwe nekundibatsira kwaive kwandiri, yaizondibatanidza kuburikidza nemota isina maoko mamamepu uye kana vachiisa iyi vhezheni itsva vanoibvisa, zvakanaka kana vaiisa zvakare
lulu perez akadaro
Mhoroi, ndine hurombo, ndine dambudziko rakakura, kana foni yangu ikapunzika inodzima uye isingachavhurika, mumwe munhu anogona kundibatsira nezvandinogona, kuwedzera pane zvinoita sarudzo yeWi-Fi yakavharwa uye ndinogona ' t kunyange pinda kuidzima uye dzokera kunoisa .. rubatsiro ndapota!
Pindura kuna lulu perez
Husiku hwakanaka, unogona kugadzirisa dambudziko iri here? Ini ndaive neiyo imwe chete asi ndaifanirwa kuibatidza pamagetsi akadzvanywa neimba panguva imwe chete
Ndine iPhone yandakatenga muna Kukadzi 2015 kuchitoro cheApple muPanama. Nhasi, Chivabvu 07, iine mari inenge izere, yakangoerekana yafa uye haina kubatidza.Ndoita sei?
Ndine IPhone 6 Plus yandakatenga muna Kukadzi 2015 kuchitoro cheApple muPanama. Nhasi, Chivabvu 07, nechaji inenge izere, yakangoerekana yafa uye haina kubatidza.Ndoita sei?
Marcela chediack akadaro
Mhoroi mose !! 3rd iphone 6s inosara yakafa, mukati memwedzi isingasviki miviri !!!
Pandinobuda kuti ndimhanye, nefoni yangu paruoko bhandi, bluetooth iri ... pandinosvika kumba yakakwana. Pakarepo inobuda, uye haichabatidzi zvekare. Vakatoshandura iyo yekutanga nemwedzi miviri yekushandisa, yechipiri nevhiki uye chechitatu chine mazuva matanhatu ekushandisa ... !!! Zvakare, kuArgentina hakuna yepamutemo Apple chitoro, ndinofanira kumirira kuti mumwe munhu afambe uye andiitire nyasha yekuenda kuichinja. Hapasisina iphone kwandiri. yechitatu ndiyo runako. Kuchinja kwechiratidzo.
Pindura Marcela Chediack
Mangwanani akanaka, ndine iPhone 6 uye kubata iyo skrini zvinoita sekunge zvese zvakave zvakakura kwazvo uye hazvipindure kana kuitangazve… .Pachave nemhinduro?
Zvakanaka ndine iyo iPhone 6 pane nguva iyo inodzima chete kana ichiri nebhatiri izere ini ndoda kuziva kuti nei ichidzima yega uye pane nguva dzaisingadi kubatidza
Patty G. akadaro
Ndatenda ini ndoda kuziva nezve izvi zvese! Usaterere kune vakatsoropodza avo vanongoda kukutsamwisa, Carmen ndine dambudziko pa iPhone6 ​​yangu neI Meseji iyo skrini inowana hafu yakatwasuka uye hafu yakamira uye handigone kuibvisa, unogona kundibatsira here kana mumwe munhu anoziva nezve iPhone 6 uye makomendi pano. Ndatenda
Pindura kuna Patty G.
Kana iyo skrini ikawedzeredzwa imhaka yekuti iwe wakamisa zoom, zvakaitika kwandiri kakati wandei. Ini ndinoibatanidza nekombuta muTunes kana kuita kuti Zoon isadaro
XAVIER DUKE akadaro
MUNHU ANOGONA KundIBATIRA …… .. KANA KUGADZIRA YANGU IPHONE 6 KUGADZISA NDINOTANGA KUGADZIRA ZVINOTAURA NDOZOTI NDINOSANGANISWA CHETE NEMAC IMAGE NEI BAR IN 10% KUGADZISA ZVIRI KUTI ZVINOSANGANISA 2 MAZUVA, Uye ICHI CHAKANGO IZVI BATTERY YAKADZIDZISWA KUNYANYA KANA KUTI UCHITSVESE YAKAGARA PAMUSORO PAMWE CHETE (NEI MAC IMAGE NEBAR PANE 10% Dzorerazve)
Pindura JAVIER DUQUE
JAIRO CASADIEGOS LEAL akadaro
Javier, masikati akanaka, chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri neangu iPhone 6, ndeipi mhinduro yavakakupa. Ndatenda.
Pindura JAIRO CASADIEGOS LEAL
Chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri uye handikwanise kuzvigadzirisa)) =
Laura kuenderana nemamwe mazita akadaro
IZVI ZVAKAITIKA KWANGU, WAKAKONZESA KUZVIGADZIRA UYE SEI? WAITA HAKO
Manuel Miguel akadaro
aifon 6 diki tangada
Pindura kuna Manuel Miguel
Ndakanga ndine aifon 5 uye yakanga yakandinakira, ndakatenga aifon 6 uye neisingasviki mwedzi inotondipa matambudziko ekufukidza pandinopinda garrefur vanhu vanosheedzera nemaseji e100 euros
Uye ini ndine maeuro mazana manomwe handikwanise kudaidza chestnut nharembozha uye tinoda gelipollas kushandisa mari, iwe unosheedza appel uye kwete kesi yekufungidzira kuti uzvihure iwe uye haugone kufonera mugarrefur, tenga imwe nhare isiri iyo aifon
Constance Lillo akadaro
Mhoroi! .. myiphone inovhura screen nguva dzese masekonzi mashanu .. uye izvo zvinoita kuti bhatiri rigare risina kana chinhu muzuva, ndinofanira kutakura chaja kwese kwese kuti ndisagare kana ichipa: (ndiani anoziva kana paine mhinduro ?
Pindura Constanza Lillo
Mhoro ... ndinogadzirisazve uye ndinodzima iphone uye ini ndasara neapuro icon
ndokumbira upindure izvo zvinondibatsira
Pindura kuna niko
Mariana Demczuk akadaro
Pindura Mariana demczuk
Pedro Pablo akadaro
Wadiwa Carmen: Ndinoyemura zvaunotaura uye matipi maererano neiyo iPhone 6, kunyangwe ini ndisina kupa chero yematambudziko ataurwa pamusoro, ndinoutora semupiro mukuru unotibvumidza kugovana ruzivo rwakakosha rwekushandisa chaiko kwemidziyo. Semaonero angu, zvichibva pane zvandakaona, ini ndinogutsikana nekuita kwechigadzirwa chandinofunga chishandiso chebasa chakanakisa uye chinopindirana zvinoshamisa neese matekinoroji anotikomberedza. Iyo iPhone 6 kunyangwe ichiongororwa zvisirizvo ndiyo yakanakisa smartphone yakatangwa neApple pamusika, inoshanda zvakanyanya uye ine saizi yakakwana ichifunga nezve Hardware iyo mumidziyo ine Android inenge isisashandi zvachose. Zvekare ndinokutendai nemubatsiro wenyu kumaforamu uye nevanhu vasina kuvaka zvakanyanya, semuenzaniso Damien. Ivo vanofanirwa kuongorora mamiriro ezvinyorwa kwete chimiro. Kunyangwe Carmen aive nezvikanganiso zvekunyora, zvinoreva chirevo hachina kumborasika. Damien anofunga here kuti izvi ndizvo chaizvo zvakakosha?
Pindura Pedro Pablo
Wadiwa Carmen, kana nhengo dzedare; Ndakatenga iyo iPhone 6 svondo rapfuura, uye ini ndakaona chimwe chinhu chinondinetsa zvakanyanya sezvo nemamwe ma cell phone brand ndanga ndisina dambudziko iri; Ini ndinobatanidza kune yeWi-Fi network, ndinoishandisa asi pandinomira kuishandisa, inongodzima yega kubva kunetiweki, ichindisiya ndakabatana nenetiweki yangu yekupa runhare, uye kuti ndibatanidze zvakare ndinofanira kuenda kunetiweki marongero ndobaya pa iyo network yeWi-Fi yandakachengeta; chokwadi ndechekuti zvinoshungurudza kuita izvi nguva dzese pandinoedza kushandisa chero chishandiso chinoda kuve chakabatana.
Ndanga ndichitarisa pane zvingasarudzwa neWiFi kuti ndione kana ndikaona chimwe chinhu chisingazivikanwe, asi handisi kuwana chero chinhu zvachose. Mumwe munhu angave ane moyo munyoro kuti ataure pane zvakaitika mune izvi. Ndatenda.
Mhoro Damian. Wakamboedza kushandisa WPA encryption? Ini ndichakuudza: Ini ndinoziva yezviitiko zvakati wandei izvo chinhu chimwe chakaitika kwatiri uye zvakatoitika nemidziyo yeApple. Muzviitiko zvandinoziva nezvazvo, neWPA encryption, iyo yatingati yakanyanya kusimba, pakanga pasina matambudziko erudzi urwu. Ndinokuudza izvi nekuti ini handizive zvinogona kuitika ne iPhone yako 6. Kubva pandakatanga kunyorera muWPA handina kana matambudziko.
Mhoroi, ndine iphone 6 3 mazuva apfuura. Husiku hwekutanga ndakaisa kuti kuchaja ndinomuka mangwana uye foni yafa. Iyo haina kubatidza. haigone kumiswazve. Uye kana bheja kana iyo usb tambo yekombuta haina kundiona.
Inogona kunge iri dambudziko ripi? pini yekuchaja, bhatiri kana kuti sero rakafa?
Mhoroi, ini ndine iPhone 6 uye kubva kwekupedzisira kugadzirisa ini ndaive nedambudziko. Ini ndinoshandisa iyo mobile data yechikumbiro (mune ino YouTube) Ini ndinobuda marongero ndopinda zvakare uye iko kunyorera hakushandi kushandisa nhare mbozha. iyo yandinogona chete kushandisa youtube newifi.
Pindura kuna lautaro
Chinhu chimwe chete ichi chinoitika kwandiri, chete neFacebook ini handigone kumutsa nharembozha yeiyo application
Ndine iPhone 4s uye ndawana chishandiso chinotumira mimhanzi yeBluetooth kune yangu mota speaker, ndinofunga izano rakanaka uye ndinoona richinyanya kubatsira kunyanya kuma audiobooks, chinhu chega chandingade kuziva kana paine imwe sarudzo .. Iyo yekushandisa inonzi Blue2car uye ini handikwanise kuwana ruzivo rwakawanda nezvazvo, unogona kundibatsira here?
jairo ivan akadaro
Ndingaite sei kuti nditangezve yangu iPhone… .nechengetedzo maitiro yakakiyiwa… .. chero bedzi foni yanga isina kukiyiwa. . . . . . ndipe matipi, sarudzo .xfa
Pindura kuna jairo ivan
Mhoroi, ndine Iphone 6 uye yakakamira, hapana chandinogona kuita, haindibvumidze kuipaka kana, ndoita sei?
Pindura kuna cleovea@gmail.com
Mhoro! ndine phne 6 uye ndiri kunetseka kuwana wifi network. Ini handitombo kuwana network uye iwo andinowana ari mashoma kwazvo. Chii chingaitika? Ini ndatotangazve zvese sezvatsanangurwa pamusoro asi dambudziko rakafanana rinoenderera, ndinogona here kutora garandi? Ini ndiri mukati me; kana kuutenga
Usambozviita kuti utangezve nharembozha. Nekuti gare gare hazvishande uye unofanirwa kutora kuti uzvigadzirise. Inotakura zvishoma zvekumisikidza kana kudzoreredza uyezve haina kutakura zvekare uye zvichingodaro. USAMBO KUDZIDZISA SEZVIITIKO PANZVIMBO IYI
Uia ndakangoidzoreredza nekuti ndanga ndisingazive uye izvozvi zviri kuitika kwandiri, inotariswa, nyaya ndeyekuti ndinobva kuArgentina uye pano hapana App Store, ndapota mumwe munhu anoziva kuzvigadzirisa.
olga cubillos akadaro
Mhoroi, ndine iPhone 6, yanga ichishanda mushe uye ikangoerekana yakanamatira, haindibvumidze kutsvedza chero chinhu pahwindo kana kudzima ... chii chandinoita kuti ndivhure, ndinoona kuti idambudziko rakajairika mune aya maserura, asi ini handiverengi mhinduro,
Pindura olga cubillos
Mhoro ! Ndine foni-6 uye ndafa, chii chingave chakaitika? Kana mumwe munhu achigona kundibatsira, ndinozvifarira.
Pindura kuna johanna
Nhasi mangwanani ndatenga makumi mashanu emamababyte epasi muIcloud, vandibhadharira kuaccount yangu (nenzira, zvakapetwa zvakaburitswa: € 50 apo zvavakapa iri € 1,98) asi iniwo handina 0.99 mega asi izvo zvishanu zvavanopa mahara. Iine chero nguva yekunonoka kubva paunenge uchiibhadhara kusvikira wapihwa iwe?
Mhoroi, ndine dambudziko neiyo iPhone 6, inononoka uye ndangariro yangu ingangoita vasia, mumwe munhu anogona kundibatsira
Pindura kuna abraham
Nguva nenguva, iyo kamera yeIPhone 6 foni inopunzika, iyo skrini yakasviba uye hapana chinoshanda, inozvigadzirisa pachayo mushure memazuva akati wandei. Ndokumbirawo kana paine anoziva zvekuita kuti izvi zviitike, ndiudzei. Ndatenda. Hector
Ndinogadzirisa, kuitira kuti zvirege kuitika
Pindura kuna Hipolito
Mhoroi, ndine Iphone 6 Plus uye kunoonekwa ngano inoti… .iyi tambo kana chishongedzo hachina kuzivikanwa, saka inogona kusashanda nemazvo neiyi iphone ……. asi zvinoitika kuti ini handina chinhu chakabatana…. Ndine dambudziko rekuti handigone kuteerera kumumhanzi, Wapps meseji meseji kana chero mhando ruzha, chete kufona, kwandinoita kuti ndikurukure kunoenda mutauri…. asi ini handizive maitiro ekugadzirisa ese akasara… anga akakwana
Mhoroi, ndine matambudziko neangu iPhone, mushure mekufona maminetsi iyo skrini yaenda, kwete foni, nekuti kudzvanya bhatani repazasi bhatani kwemasekondi mashoma inomutsa iko kushanda kwezwi.
Madzishe, munofunga ndingagadzirisa sei izvi?
Ndine iPhone 6s uye ndine dambudziko kutumira maemail .. Hazvindibvumire .. ndinogona kugamuchira asi kwete kutumira. Ini ndinowana sarudzo inotaura kuti yangu email kana password haina kunaka, uye hazvisi. Ndingazvigadzirisa sei? Ndakaedza kudzima email yangu ndokuiisa mukati uye hapana mhinduro
Rossy romero akadaro
Carmen: Ndinovimba unogona kundibatsira.Ini ndiri mutsva neiyi iPhone ndine 6 yekuwedzera asi haina iyo 3D application kana iyo kamera ine mhenyu pikicha kana kumberi kupenya.Handina kuwana chero eimwe sarudzo. ini nei?
Pindura Rossy Romero
Mhoroi ndakapa back up kune yangu iPhone 6 s uye skrini yakadzima asi foni ichiripo, inogamuchira mafoni uye ndinogona kupindura asi kana ndikaibatanidza kune iyo pc inondibvunza iyo kodhi yenhamba uye zvimwe kana zvishoma ini bata sikirini uko manhamba aripo asi kwete Kuvhura, chii chandingaite? Screen takaenda
Mhoroi, yangu iPhone 6 yatove kechipiri iyo isina mufananidzo, izvi zvinoreva kuti kana mafoni akapinda asi handikwanise kupindura nekuti iyo skrini haina kubatidza, handigone kuidzima, nezvimwe. kana mumwe munhu aigona kundibatsira ini ndingafarire kwazvo
Mhoro, zuva rakanaka, ndine iyo iPhone 6 uye uye kubva pandakaidzokorora, inonamira pachiratidziro cheaprtuna uye ndinofanira kumirira kuti itange, pane mhinduro here
zvimwe chete! 🙁
Pindura kuna godaro
Marcelo, zvimwe chete zvinoitika kwandiri! 4G yakanyanyisa kunonoka futi? Sezvo ekupedzisira maviri ekuvandudza achidzokera kumashure, inguva yekutanga kuve nedambudziko mumakore neIOS. Achamuka, Mabasa, rimwe ramazuva ano uye achapisa tooooddooo !!!
Kana ndikataura parunhare ne bluetooth headset ndinonzwa asi havandinzwe, ndingaitei?
Ndine dambudziko ne iPhone yangu 5, ndinoisa youte music uye ndinoinyatsoteerera, asi kana ndikaisa mahedhifoni, mumhanzi chete ndiwo unobuda asi izwi rinongobuda ruzha chete, izwi rinonyora ravanonditumira hainzwikwe kuburikidza nemahedhifoni…. Chete kana ini ndikashandisa chinobatsira kunzwa, hachishande… ndinofanira kuitei ?? unga ndibatsira here?
Manuel Alejandro Chacin Rodriguez akadaro
iwe unofanirwa kutenga mamwe mahedhifoni, akakuvara.
Pindura kuna Manuel Alejandro Chacin Rodirguez
Roberto Becerril akadaro
Ndine matambudziko nekupenya kunogara kwakasviba uye zvinotora nguva yakareba kudzosa kupenya iri iPhone 6s
Pindura kuna Roberto Becerril
JESU ANODA akadaro
Husiku hwakanaka kubva kuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweMexico musangano unodiwa,
Ndine dambudziko rewifi neangu iPhone 6 mushure mekuvandudza nezuro husiku, ini ndinongobva kure ne router zvishoma uye kusimba kweiyo wifi kwakarasika, inongogadzikana zvine mwero kana ndiri 1 mita kubva kune iyo router. Ini ndinoramba ndichiongorora uye hapana. Iko hakuna mhinduro yakajeka parizvino kunze kwekunge iwe wakamirira kuvandudzwa nyowani kana kunyangwe iwe uchigona kugovana dzimwe pfungwa neni. Ndine iphone 6 ine iOS 10.0.2 (yazvino).
Ini ndatoedza zvese zvekutanga, kudzoreredza kuburikidza neesefa, kuburikidza neitunes, kuburikidza neicloud uye hapana !!! ….
chero mazano ???????? '
Pindura kuna JESU DIARTE
Juliana Garmendia akadaro
Mhoroi vanhu vese! Ndine iPhone 6 uye iyo huru skrini haishande, ndiko kuti, ndinogamuchira mameseji, zviziviso uye kufona, asi hazvindibvumidze kupindura nekuti hapana chinoonekwa, chete mufananidzo wangu wekumashure wakakudzwa, handigone kuidzima kana kuivhura , zvinongondiregedza kurodha pasi tabo uye ndione kuziviswa, kana ndichisarudza imwe iyo inonditumira kuvhura foni uye ipapo haichandibvumidze kuvhura nechigunwe chemunwe kana kuisa keyboard kwandiri, pane chero munhu anoziva zvakaitika? kana chii chandingaite? Zviripachena ini handigone kuidzima kana! Ndatenda!!
Pindura kuna Juliana Garmendia
Mhoro Marcos, ndine dambudziko rakafanana raunotaura. Iwe wakakwanisa kuigadzirisa ini ndine iyo Mac kubva kunonoka 2015.
Mhoroi, kwaziwai mangwanani, ini ndoda kuziva kuti nei iyo iPhone 6 Plus isingandibvumidze kuti ndipinze mafomu angu kunyangwe ndabata zvakadii skrini, mukushandisa haina kunditendera kuti ndidzime ndobata zvakare kuti ndiwedzere pamusoro pese nguva yandinobata sikirini kuti ndiise password. siya uye ndinofanira kuzviita netsoka dzangu, mumwe munhu anogona kundibatsira ndatenda
Mhoro. Ini ndiri mutsva kune ino foramu. Ndine dambudziko Kufona kwese kunouya seusingazivikanwe. Kana iwe uchinge waisa iyo yekumisikidza / iri kuuya yekufona ID, bhatani "rakapetwa" uye harindibvumidze kuti riite kana kuti risamise. Ndingagadzirisa sei izvozvo? Ndichaonga rubatsiro. Alicia
Ndine ipone 6 ndinoiita 126 gb
Dambudziko randiinaro nderekuti skrini inoramba yakakiiwa, unogona kubva pane imwe skrini uchienda pane imwe kana ini handikwanise kuvhura chero chirongwa.
mushure mechinguva inoshanda uye mushure mekanguva inonamatira zvakare
Pane mumwe munhu angandiudza dambudziko rauinaro here
luisao acosta akadaro
Mangwanani akanaka, pane munhu angandibatsira nharembozha yangu, ini ndachinja iyo skrini uye haiende kupfuura apuro uye kana ndiri pasi peiyo software inokanganisa, ndoitei?
Pindura kuna luisao acosta
Yangu iPhone 6 Plus inobuda mukudzora yega
Vhura chero chishandiso kana kufona ndisina kukwanisa kuchidzora
Ndinofanira kuidzima nguva dzese kuti ndidzivise kufona, chokwadi chakatoneta ini hee
Asi zvinongondikonzera dambudziko iri kana ndikaritakura muhomwe yebhurugwa rangu, kwete saizvozvo pandinoripfeka mubhachi rangu, asi kuve timu yakanaka kwakanaka.
Ini ndichafanirwa kuitumira kuti igadzirise kuchitoro cheapple muLima ndizvo zvandakaudzwa naApple
Anodiwa, zvinoitika kwandiri neIphone 6 yangu ndeyekuti ndinofanira kunamirwa kumodem, kuti ndive nechiratidzo cheWi-Fi, kana ndikaenda kure nemodemu iyo chiratidzo charasika, ndakaedza kumisazve zvakadaro ndikaverenga kuti modhi iyi yakauya nematambudziko eantena, chii chandingaite?
Munhu akanyora this post achiri mupenyu here? Unofanira kuzviuraya kana kuchinja mabasa.
Mushure mekuvandudzwa kwe iPhone yangu 6 plus iyo wifi uye bluetooth yakanga isingashandi. Mumwe munhu ndibatsireiwo ndapota.
Ichokwadi ndechekuti izvo zvazvino uno zveOSOS zvinosemesa. Ndiri kufunga zvakanyanya nezvekuchinja kuenda kuApple.
Ndine kunonoka kunyora uye bhatiri rinongoerekana raderera uye kana ndikashandisa kamera zvinoita sekunge nemashiripiti iyo inodzima uye haina kudzoka kunze kwekunge ndaivhara mukati ndoziva kuti ichiri nebhatiri.
Izvi zvakaitika neiyo huru IOS 11, Ndatenda chaizvo, kuti IOS yekuvandudza yakandisiya ndakatsamwa chaizvo, kunaka kwakaita iyo iPhone kwaive mumaminetsi mashoma neiyo yekudzokorora
Karla Garcia akadaro
Iyo kamera pane yangu iPhone 6 Plus haisi kushanda. Handikwanise kutora mifananidzo.
Pindura Karla de Garcia
philip hassan akadaro
zvakanaka kune vese vateveri veapuro hombe yechivi, chokwadi ndechekuti ruzivo rwamakandipa rwakabatsira zvakanyanya, yangu iphone 6 yanga ichitopupurira kusagadzikana muiyo waya yekubatanidza …… .Ndatenda !!!
Pindura felipe hassan
Tim Cook naEddy Cue vanopinda musangano wepagore weSun Valley